Nagarik Shukrabar - कानुनी कुरा
प्रेम गर्न कानुनले छेक्दैन
प्रेम परिभाषामा उतार्न नसकिने भावना हो। प्रेम के हो भनेर परिभाषा गर्न खोज्नु पनि दुष्प्रयास हो।
श्रीमतीलाई अंश दिनैपर्छ र ?
सम्बन्धविच्छेद हुने अवस्थामा पत्नीलाई अंश दिन वा मानाचामल भर्न अर्थात् कुनै पनि खर्च भराउन पति बाध्य नहुने व्यवस्था दफा ९९ को उपदफा ६ ले गरेको छ।
उच्चपदस्थ कर्मचारीबाट हुने दुर्व्यवहारकाे उजुरी कसरी?
सुरक्षित, स्वस्थ तथा मर्यादित वातावरणमा काम गर्न पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार हो।
सम्पत्ति अरूलाई दान वा बकस दिन मिल्छ कि मिल्दैन ?
कुनै व्यक्तिले आफ्नो हक र स्वामित्वको सम्पत्ति कुनै व्यक्तिलाई वा धार्मिक, सामाजिक, सार्वजनिक वा सामुदायिक कार्यका लागि निःशुल्क रुपमा दिनुलाई दान भनिन्छ भने कसैलाई पारिवारिक स्नेहको कारण आफ्नो हक, स्वामित्व पुग्ने सम्पत्ति इनाम, पुरस्कार वा बक्सिसको रुपमा दिने सम्पत्तिलाई बकस भनिन्छ
सम्झौता गरेर मात्र घरभाडामा बस्नु राम्रो
सम्झौता गरेर घर बहालमा लिँदा न घर बहालमा दिने व्यक्तिले आफूले गरेको सम्झौताबाट पन्छिन पाउँछ न त घर बहालमा लिने व्यक्ति नै।
अदालतको म्याद गुजारे के हुन्छ ?
म्याद भनेको मुद्दाको रोहमा कुनै व्यक्तिको नाममा अदालतबाट जारी गरिने सूचना वा इतलायनामा हो। अदालतले तोकेको म्यादमा अदालतमा उपस्थित हुनु अनिवार्य हुन्छ।
सम्पत्तिमा नाबालकको हक
म सानो छँदा आमा र बाबुको नाममा भएको जग्गा दुवैले बिक्री गर्नु भएछ । मेरो समेत हक लाग्ने सम्पत्ति बिक्री गरेकाले ममाथि अन्याय भएको छ ।
अंशमा सबैको मञ्जुरी आवश्यक
अंशबण्डा कानुनले दिएको अधिकार हो। मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को पच्छिेद १० मा अंशबण्डासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
जबर्जस्ती गर्भपतन गरे जेल
गर्भपतन गराउने र गर्भपतन गराउने उद्देश्यले गर्भमा रहेको भ्रुणको लिंग पहिचान गर्ने वा गराउनेलाई तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद र लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने वा गराउनेलाई लिंग नहेरी गर्भपतन गराउनेलाई भन्दा १ वर्ष थप गरेर सजाय हुन्छ।
नेपाली नागरिकता पाउने आधार
प्रत्येक नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुन्छन्। यसको अर्थ के हो भने कानुनको दृष्टिमा समान हुनका लागि र अधिकार प्राप्त गर्नका लागि नागरिक हुनु जरुरी हुन्छ।
उजुरी गर्ने बानी बसालौं
कसैले कुनै एक खाद्य पदार्थलाई अर्को खाद्य पदार्थ हो भनी वा न्यून गुणस्तरको खाद्य पदार्थ वा अखाद्य पदार्थलाई उच्च गुणस्तरको खाद्य पदार्थ हो भनी ढाँटी वा झुक्याई वा कुनै उच्च गुणस्तरको खाद्यपदार्थमा निम्न स्तरको खाद्यपदार्थ वा अखाद्यपदार्थ मिसावट गरी बिक्री वितरण गर्न हुँदैन।